MB 2016 Oktobra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB Ôktôbra
Nandritra ny taona maro aho no nifady hanina tamin’ny Yom Kippur (Alemà: Andro Fanavotana), andro fety jiosy ambony indrindra. Nanao izany aho tamin'ny finoana diso fa nampihavanina tamin'Andriamanitra aho tamin'ny nandaozako tanteraka ny sakafo sy ny ranon-javatra tamin'io andro io. Maro amintsika angamba no mbola mahatadidy io fomba fisainana diso io. Na izany aza, nohazavaina taminay, ny fikasana hifady hanina amin'ny Yom Kippur dia tao anatin'ny fampihavanana (son-ung [fananganan-janaka]) amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asantsika. Nanao rafitra ara-pivavahana misy fahasoavana miampy asa isika - tsy mijery ny tena zava-misy izay i Jesoa no fampihavanana antsika. Mbola tadidinao angamba ny taratasiko farany. Momba an'i Rosh Hashanah, ny Taom-baovao jiosy, izay antsoina koa hoe Andron'ny Trompetra. Nofaranako tamin’ny filazana fa nitsoka trompetra indray mandeha Jesosy ary Tompon’ny taona – Tompon’ny fotoana rehetra tokoa. Amin’ny maha-mpanatanteraka ny faneken’Andriamanitra tamin’ny Isiraely (ny fanekena taloha), dia niova mandrakizay i Jesosy, ilay Mpamorona ny fotoana. Izany dia manome antsika ny fomba fijery ny Fanekena Vaovao momba an'i Rosh Hashanah. Raha mijery ny Yom Kippur amin’ny maso amin’ny Fanekena Vaovao koa isika, dia takatsika fa Jesosy no fampihavanana antsika. Toy ny amin’ny andro firavoravoan’ny Isiraelita rehetra, ny Andro Fanavotana dia manondro ny olona sy ny asan’i Jesosy ho famonjena sy fampihavanana antsika. Ao amin’ny Fanekem-pihavanana Vaovao dia nampihariny tamin’ny fomba vaovao ny rafitry ny litorzia Isiraelita taloha.
Takatsika izao fa ny andro firavoravoana amin’ny kalandrie hebreo dia nanondro ny fiavian’i Jesosy ary noho izany dia lany andro. Efa tonga i Jesosy ary nanangana ny fanekena vaovao. Fantatsika àry fa nampiasa ny kalandrie Andriamanitra mba hanampiana antsika hahafantatra hoe iza marina i Jesosy. Ny zava-niseho efatra lehibe teo amin’ny fiainan’i Kristy no ifantohantsika ankehitriny dia ny nahaterahan’i Jesosy, ny fahafatesany, ny nitsanganany tamin’ny maty ary ny niakarany tany an-danitra. Yom Kippur dia nanondro fampihavanana amin'Andriamanitra. Raha tiantsika ny hahazo izay ampianarin’ny Testamenta Vaovao amintsika momba ny fahafatesan’i Jesosy, dia tokony hijery ny modely amin’ny fahatakarana sy ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Testamenta Taloha izay voarakitra ao amin’ny faneken’Andriamanitra tamin’ny Isiraely (ny Fanekena Taloha). Nilaza i Jesosy fa samy manambara Azy avokoa izy rehetra (Jao 5,39- iray).
Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia Jesosy no fitaovana ahafahantsika mandika tsara ny Baiboly manontolo. Isika izao dia mahazo ny Testamenta Taloha (izay ahitana ny Fanekempihavanana Taloha) amin’ny alalan’ny lamin’ny Testamenta Vaovao (miaraka amin’ny Fanekempihavanana Vaovao izay notanterahan’i Jesoa Kristy tanteraka). Raha mandroso amin’ny filaharana mifamadika isika, ny fanatsoahan-kevitra diso dia hitarika antsika hino fa tsy hanomboka ny Fanekena Vaovao raha tsy amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany. Fahadisoana fototra io fiheverana io. Misy diso mihevitra fa ao anatin’ny vanim-potoanan’ny tetezamita eo amin’ny fanekena taloha sy vaovao isika, ka noho izany dia voatery mitandrina ny andro firavoravoana hebreo.
Nandritra ny fanompoany teto an-tany, dia nohazavain’i Jesosy fa tsy misy dikany ny litorjian’ny fanompoam-pivavahana israelita. Na dia nandidy karazana fanompoam-pivavahana manokana aza Andriamanitra, dia nasehon’i Jesosy fa hiova amin’ny alalany izany. Nohamafisiny izany tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ilay vehivavy teo am-pantsakana tany Samaria (Jao 4,1-25). Nanonona an’i Jesosy izay nanazava taminy aho fa tsy ho any Jerosalema na any amin’ny toerana hafa intsony ny fivavahana amin’ny vahoakan’Andriamanitra. Tany amin’ny toerana hafa, dia nampanantena izy fa na aiza na aiza hiangonan’ny roa na telo, dia ho eo anivon’izy ireo izy8,20). Nilaza tamin’ilay vehivavy samaritanina i Jesosy fa rehefa tapitra ny fanompoany teto an-tany, dia tsy hisy intsony ny toerana masina.
Azafady mba diniho izay nolazainy taminy:
Tonga ny fotoana izay tsy hivavahanareo amin'ny Ray amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema.
Ho avy ny andro, ary tonga ankehitriny ny tena mpivavaka hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny mpivavaka toy izany koa no tian'ny Ray. Andriamanitra dia Fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka aminy amin’ny fanahy sy ny fahamarinana (Jao 4,21- iray).
Tamin’ny alalan’io fanambarana io, Jesosy dia nanaisotra ny maha-zava-dehibe ny fombafomba fanompoam-pivavahana tamin’ny Isiraelita - rafitra voafaritry ny lalàn’i Mosesy (ny fanekena taloha). Nanao izany i Jesosy satria hotanterahiny manokana ny lafiny rehetra amin’ity fandehan-javatra ity — ka ny tempolin’i Jerosalema no foibeny — amin’ny fomba maro samihafa indrindra. Asehon’ny fanambaran’i Jesosy tamin’ilay vehivavy samaritanina fa tsy ilaina intsony ny fivavahana maro araka ny fomba ara-bakiteny teo aloha. Koa satria tsy voatery nankany Jerosalema intsony ny tena mpivavaka tamin’i Jesosy, dia tsy afaka nifikitra tamin’ireo didy voasoratra tao amin’ny lalàn’i Mosesy intsony izy ireo, izay niankinan’ny fandehan-javatra tamin’ny fanompoam-pivavahana fahiny tamin’ny fisiana sy ny fampiasana ny tempoly.
Miala amin'ny fitenin'ny Testamenta Taloha isika izao ary mitodika tanteraka amin'i Jesosy; miova amin'ny aloky ny mazava isika. Ho antsika dia midika izany fa avelan'i Jesoa hamaritra manokana ny fahatakarantsika ny fampihavanana amin'ny asany amin'ny maha mpanelanelana antsika eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy, Jesosy dia niditra tao anatin'ny toe-javatra iray izay nomaniny ho azy teo amin'ny Isiraely taloha ary niasa tamin'ny fomba ara-dalàna sy noforonina hanatanterahana ny fanekena taloha, anisan'izany ny fahatanterahan'ny Andro Fanavotana.
Ao amin’ny bokiny hoe Incarnation, The Person and Life of Christ, TF Torrance dia manazava ny fomba nanaovan’i Jesosy ny fampihavanana antsika tamin’Andriamanitra: Tsy nolavin’i Jesosy ny toritenin’i Jaona Mpanao Batisa momba ny fanambarana ny fitsarana: Teo amin’ny fiainan’i Jesosy tamin’ny naha-olombelona azy sy talohan’ny zavatra rehetra. , tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Jesosy, dia nampihatra ny didim-pitsarany tamin’ny ratsy Andriamanitra, tsy tamin’ny fanerena azy tamin’ny kapoka iray fotsiny, fa tamin’ny fanintonana tanteraka azy tao amin’ny halalin’ny faharatsiana, mba hanesorana ny fanaintainana sy ny fahamelohana ary ny fijaliana rehetra horaisina. Koa satria Andriamanitra mihitsy no tonga hitondra ny faharatsian’ny olombelona rehetra eo Aminy, ny fitsabahany amin’ny fahalemem-panahy dia manana hery lehibe sy mipoaka. Izany no tena herin’Andriamanitra. Izany no mahatonga ny hazo fijaliana (maty teo amin’ny hazofijaliana) miaraka amin’ny fahalemem-panahy sy ny faharetana ary ny fangoraham-po tsy azo ihodivirana, dia tsy vitan’ny hoe fanehoana herim-po miaritra sy mahery hita maso fotsiny, fa fihetsika mahery vaika sy mahery setra indrindra, tsy mbola niainan’ny lanitra sy ny tany hatrizay: ny hamely ny fitiavana masin’Andriamanitra amin’ny tsy maha-olombelona sy amin’ny fampahorian’ny faharatsiana, amin’ny fanoherana mahery vaika rehetra ataon’ny ota (pejy 150).
Raha ny iray ihany no mihevitra ny fampihavanana ho fifanarahana ara-dalàna amin'ny fahatakarana ny fahalalana tsara ny tenanao amin'Andriamanitra, dia mitarika amin'ny fomba fijery feno, izay indrisy fa misy kristiana maro ankehitriny. Ny fomba fijery toy izany dia tsy misy dikany lalina amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho soa antsika. Amin'ny maha mpanota antsika, dia tsy mila fahalalahana fotsiny isika amin'ny fanasaziana ny fahotantsika. Ilaintsika fa ny ota mihitsy dia omena tsipoitra farany mba hamingana antsika.
Izany indrindra no nataon’i Jesosy. Tsy nitsabo ny soritr'aretina fotsiny izy fa nitodika tany amin'ny antony. Io antony io dia azo antsoina hoe The Undoing of Adam, miorina amin'ny boky nosoratan'i Baxter Kruger. Io anaram-boninahitra io dia maneho ny zava-bitan’i Jesosy tamin’ny alalan’ny fampihavanana ny olona tamin’Andriamanitra. Eny, nandoa ny sazy noho ny fahotantsika i Jesosy. Saingy mihoatra lavitra noho izany no nataony - nanao fandidiana cosmic izy. Nasiany famindran-po ho an’ny olombelona lavo sy marary ota! Io fo vaovao io dia fo fampihavanana. Ny fon’i Jesosy dia ilay mpanelanelana sy mpisoronabe, amin’ny maha-Andriamanitra sy ny olombelona, ​​Mpamonjy antsika sy zokiny. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, araka ny nampanantenain’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Ezekiela sy Joela mpaminany, no nitondran’i Jesosy fiainam-baovao ao amin’ny rantsambatana maina sy manome antsika fo vaovao. Ao aminy isika no zavaboary vaovao!
Mifandray aminao amin'ny fahariana vaovao,